Sospetti - Итальянский - Бирманский Переводы и примеры
Вы искали: sospetti (Итальянский - Бирманский)
Perciò il mio popolo sarà deportato senza che neppure lo sospetti. I suoi grandi periranno di fame, il suo popolo sarà arso dalla sete
ထိုကြောင့် ငါ၏လူတို့သည် ပညာမရှိ၊ ဘမ်းဆီး သိမ်းသွားခြင်းကို ခံရကြ၏။ မှူးမတ်တို့သည် မွတ်သိပ်၍ သေကြ၏။ ဆင်းရဲသားတို့သည် ရေငတ်၍ ပူဆွေးလျက် ရှိကြ၏။
သင်သည် အရင်ကြားရပြီ။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ ကို ကြည့်ရှုလော့။ သူတပါးတို့အား မကြားမပြောဘဲ နေမည်လော။ ယခုမှစ၍ အသစ်သောအရာ၊ ဝှက်ထား သောအရာ၊ သင်မသိသေးသော အရာတို့ကို ငါဘော်ပြ ၏။
Quando arriverete là, troverete un popolo che non sospetta di nulla. Il paese è vastoeDio ve lo ha messo nelle mani; è un luogo dove non manca nulla di ciò che è sulla terra»
သွားလျှင် သတိမရှိသောလူမျိုးနျင့် ကျယ်ဝန်းသော ပြည်ကို တွေ့ကြလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည် သင်တို့လက်၌ အပ်တော်မူမည်။ ထိုပြည်၌ မြေကြီးဥစ္စာ စုံလင်လျက်ရှိသည်ဟု ပြောဆိုကြ၏။
ထိုအိမ်၌ရှိသမျှတို့သည်၊ မစင်ကြယ်ရာသို့ ရောက်မည်ကို စိုးရိမ်၍၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် နူနာက အကြည့်အရှုမဝင်မှီ၊ ရှိသမျှကို ထုတ်စေခြင်းငှါ စီရင်ရမည်။ ထိုနောက် ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ထိုအိမ်ကို အကြည့်အရှုဝင်၍၊-
direcciã³n (Испанский>Английский)lato opposto accoppiamento (Итальянский>Английский)alas cakap (Малайский>Китайский (упрощенный))மிகவும் நன்றி (Английский>Тамильский)logan canu2019t bear it (Английский>Итальянский)للمحرقة (Арабский>Хорватский)次级方案战略有以下内容 (Китайский (упрощенный)>Английский)nag hakot (Тагальский>Английский)wagemut (Немецкий>Чешский)cheesecake (Чешский>Русский)sugfläkt (Шведский>Английский)baltazzàr (Итальянский>Вьетнамский)momentum (Английский>Тагальский)alchemy translations (Английский>Немецкий)sugnay na pang abay (Тагальский>Английский)beeping in english (Английский>Тамильский)sahi samay ka intjar karo (Хинди>Английский)siddha medicine (Английский>Тамильский)cotone garzato (Итальянский>Английский)dont be sad my love (Английский>Итальянский)προστατίτις (Греческий>Английский)combattre (Французский>Латинский)acomplia (Испанский>Датский)yamma (Испанский>Английский)dekbedovertrek (Голландский>Французский)